Hello Nepal News » यस्ता छन् दाह्री पाल्दाका अपत्यारियाला फाइदाहरू !
यस्ता छन् दाह्री पाल्दाका अपत्यारियाला फाइदाहरू !
पुरुसत्वको परिचायक मानिने दाह्री अहिले युवापुस्तामा फेसन जस्तै भएको छ । धेरैजसो पुरुषहरूले अचेल दाह्री पालेकै देख्न सकिन्छ । काट्न अल्छी भएका कारण पालिने दाह्री अहिले कतिपयले फेसन, शौखका लागि समेत पाल्ने गरेको पाइन्छ ।
प्रकाशित मिति २७ पुष २०७६, आईतवार ०५:२४